အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာအောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EAအောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA 3
စျေးနှုန်း: $ 119 (၁ REAL & 1 Demo စာရင်း၊ အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ထောက်ပံ့မှုများ)
- အခြေခံ: ၁ REAL & 1 DEMO အကောင့် - အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်အဆင်ပြေသောသုံးစွဲသူပံ့ပိုးမှု - ပုံမှန်စျေး - ဒေါ်လာ ၁၁၉
- စံ:2REAL &2DEMO အကောင့်များ - အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ဖော်ရွေမှုပံ့ပိုးမှု - ပုံမှန်စျေး - ဒေါ်လာ ၁၉၉
- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်:3REAL &3DEMO အကောင့်များ - အခမဲ့မွမ်းမံမှုများနှင့်ဖော်ရွေမှုပံ့ပိုးမှု - ပုံမှန်စျေး - ဒေါ်လာ ၁၉၉
အောက်စီဂျင် FX TRADER EA သုံးသပ်ချက် - Metatrader4အတွက်အကျိုးအမြတ်ရသည့် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA အစွမ်းထက်နှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည် Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချရ, မှီခိုနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူအားလုံးအတှကျမွငျ့မားထိရောက်မှုပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးခေတ်မီ FX စက်ရုပ်တစ်ဦးကယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ developer များအဆက်မပြတ်ကြောင့်သင်တို့အဘို့ optimized ကြောင်းသေချာစေရန်ဒီ Forex ကုန်သွယ်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်။
ဤ Forex စက်ရုပ် ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကုန်သွယ်ဖြေရှင်းချက်ကြောင်းသေချာစေရန်ကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဤတွင်ဒီအလွန်အမင်းအမြတ်အစွန်း FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏အရေးအပါဆုံး features တွေနေသောခေါင်းစဉ်:
EA ၏4နာရီအချိန်ဘောင်ပေါ်တွင် EURUSD ငွေကြေးတစ်စုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ
ဤသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး setup ကိုနှင့်အသုံးပြုခြင်းမှရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, ပြီးပြည့်စုံသော entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်မှတ်ပေးသည်
Start မှ Finish အထိအလိုအလျောက်အပြည့်အ ၀ - သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုဖွင့်ပြီးစီမံခန့်ခွဲသည်
အဆိုပါ Forex EA ၏ အဆိုပါ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းရှုပ်ထွေး algorithms အစုတခုအပေါ်အခြေခံသည်။
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA သာအကောင်းဆုံးနှင့်ရေရှည်အောင်မြင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှတဆင့်ထားကြပါတယ်သေချာစေရန်ဦးရေပြားနှင့်ခြံကိုမသုံးပါဘူး။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးစနစ်ကယနေ့, ဒါပေမယ့်လည်းရှေ့ဆက်မယ့်ကိုအကောင်းဆုံးစနစ်ကမသာမရဟုဆိုလိုသည်။
နယူး updates များကိုအဖြစ်မကြာမီသူတို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသကဲ့သို့သင်တို့ပေးပို့နေကြသည်။ ဒါကကို EA သင်အချိန်ပြီးနောက်အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုအချိန်ပို့ဆောင်တတ်ကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရှင်းစွာ FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်က၎င်း၏လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ပေးခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာနှင့်သင်တို့အဘို့အရောင်းအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ FX စက်ရုပ် အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ 24 /5ပေါ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။ သင်ကကို turn off မဟုတ်လျှင်ဒီတော့သင်ကတစ်ခုတည်းအကျိုးအမြတ်ကုန်သွယ်မှု option ကိုလက်လွတ်မည်မဟုတ်။
ကျွန်တော်တို့ကိုမတူဘဲလူသားမြားသညျ, ထို Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကငျးမဲ့သည်နှင့်သာလုံးဝ Calculator ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်စီဂျင် FX TRADER EA - ကုန်သွယ်ရေးယုတ္တိဗေဒ၊ တည်ဆောက်ပုံနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအကြောင်း
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA ကုန်သည်များ FX ဈေးကွက်ထဲကအကောင်းဆုံးရကူညီပေးနေရည်ရွယ်သည်။ က installed လျက်ရှိသည်ပြီးတာနဲ့, လူ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဆိုပုံစံမလိုပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာအများအပြားညွှန်းကိန်းများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်တည်ဆောက်ဖြစ်သောယင်း၏ဖယ်ရှားရာမှာမဟာဗျူဟာ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအလိုအလျှောက်အလုပ်လုပ်သည်။
ထို့ပြင်နှင့်အတူ အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ E ကိုxpert အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်, သင်ပိုကောင်းတဲ့အနိုင်ရအချိုးအစား၏ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ထားသော software ၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်တွေ့နိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းလည်းဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကို EA နေသမျှကာလပတ်လုံးပွဲစားကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားအဖြစ် FX အကျိုးဆောင်များနှင့်အကောင့်မဆိုအမျိုးအစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံးအကောင့်လက်ကျန်ငွေ 100USD ကိုအကြံပြု - 150USD ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်အသုံးပြုတချို့ကပွဲစားများမှာ FortFS, Forex4you, IC စျေးကွက်များ, RoboForex သို့မဟုတ် Tickmill ။
အဆိုပါ FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးလက်ငင်း download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ဤ FX စက်ရုပ် purchasing ပြီးနောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှ, activation အဘို့သင့် MT4 အကောင့်အရေအတွက်ကများပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏လိုင်စင် activation အကြောင်းကိုအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားစာရပါလိမ့်မယ်။
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 119 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
အဆိုပါတရားဝင်အောက်ဆီဂျင် FX ကုန်သည်များ EA ၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
နေ့စွဲ Start: ဇန္နဝါရီလ 28, 2019
နေ့စွဲ Start: မေလ 12, 2019
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA - METATRADER4performance UPDATE အကျိုးအမြတ်ရ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး: + 38.3% MONTHLY Return (အစစ်အမှန်ငွေ ACCOUNT ကို!) ချစ်ခင်ရပါသောသူချင်း Forex ကုန်သည်, သတင်း! အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Metatrader4အကျိုးအမြတ်ရ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးကဒီမှာပိုပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆုကြေးငွေ Get ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ: https://www.bestforexeas.com/oxygen-fx-trader-ea-review/ အောက်စီဂျင် FX ကုန်သည်များ EA ၏အပြည့်အဝမယ့်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါသည် ယင်း၏အသုံးပြုသူများကအားလုံးအတှကျယုံကြည်စိတ်ချရ, မှီခိုနှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှုကမ်းလှမ်းကြောင်း automated Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး။ ဒါဟာစျေးကွက်အပေါ်အများဆုံးခေတ်မီ FX စက်ရုပ်တစ်ဦးကယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ developer များအဆက်မပြတ်သေချာကြောင့်စေရန်ဤ Forex ကုန်သွယ်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်... ဆက္ဖတ္ရန္
မင်္ဂလာပါဘယ်လိုအောက်စီဂျင် ea ၏ drawdown ပါသလဲ ကမတှေ့နိုငျ
မှ Reply ဇာခရိ
, ဇာခရိမင်္ဂလာပါအောက်ဆီဂျင် FX ကုန်သည်များကို EA ၌သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားများအတွက်သင်သည်ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရယူပါ: https://www.bestforexeas.com/oxygen-fx-trader-ea-review/ အကြံပြုချက်များကို EA က Settings: ကိုအသုံးပြုခြင်းက default settings ကိုသင်္ကေတ: EURUSD အချိန် Frame က: H4 ပွဲစား: အားလုံးပွဲစားဆိုအကောင့်အမျိုးအစားနိမ့်ဆုံးအပ်ငွေ: 1004- 4: 2016.01.04 မော်ဒယ်: တိုင်းကို tick (အရှိဆုံးတိကျသောနည်းလမ်း) ကနဦးသိုက်သင်္ကေတ: EURUSD (ယူရိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ vs) ကာလ: 00 နာရီ (H00) 2019.01.31 20 $ 00 ဤတွင်အောက်ဆီဂျင် FX ကုန်သည်များ EA ၏အဘို့မဟာဗျူဟာစမ်းသပ်အစီရင်ခံစာရဲ့ : 99.00 စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ: 100918.78 http://oxygenfxtrader.com/StrategyTester.htm စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ရလဒ်များ 107220.20 အမြတ်အချက်: 17.02 အကျယ်ချဲ့ drawdown: 18370.25 (18.22%) ဆွေမျိုး drawdown: 28.01% (1817.88) က Short ရာထူး (အနိုင်ရ%): 228 (96.93%)... ဆက္ဖတ္ရန္